အင်ဖိုограф - လူများအွန်လိုင်းဘာလုပ်နေကြတာလဲ။
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 18, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လူတွေအွန်လိုင်းမှာဘာလုပ်နေကြတာလဲ။ ဒီအချက်အလက်တွေကအဖြေကိုပြောတယ်။ ၃ နှစ်အတွင်းအချက်အလက်တွေစုဆောင်းတယ် Pew အင်တာနက် & အမေရိကန်ဘဝစီမံကိန်းခြေရာကောက်စစ်တမ်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိသုတေသနပြုခြင်း။ ဖျော်ဖြေရေး၊ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ၊ ဘဏ္ancesာရေးများ၊ သတင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊
အမေရိကန်လူကြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်အင်တာနက်ကိုသုံးကြသည်။ သူတို့အွန်လိုင်းမှာဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းစဉ်းစားဖူးသလား။ ၎င်းတို့သည်အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် Youtube ဗီဒီယိုများကိုလွှင့်ထုတ်နေခြင်းလား။ အောက်မှာရှာပါ။
လူတွေဘာလုပ်ကြမလဲ အွန်လိုင်းအများဆုံးလုပ်ပါ? အီးမေးလ်ပို့ပါသို့မဟုတ်ဖတ်ပါ လူတွေဘာလုပ်ကြမလဲ အနည်းဆုံးလုပ်ပါ? ဘလော့ဂ် ရှားပါးမှုက ၀ ယ်လိုအားကိုတွန်းအားပေးသည်။ လူအများအပြားကဘလော့ဂ်မတင်ကြတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားရဲ့ကြားခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးကအရမ်းကောင်းတယ်။
သတင်းအချက်အလက် Flowtown - လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလျှောက်လွှာ.
Tags: pewPew အင်တာနက် & အမေရိကန်ဘဝစီမံကိန်းခြေရာကောက်စစ်တမ်းအင်တာနက်သုတေသန pewလူတွေအနည်းဆုံးအွန်လိုင်းကိုဘာလုပ်ကြလဲလူအများစုကအွန်လိုင်းမှာဘာလုပ်ကြလဲ